Cajalado Thread Information - Shiinaha weligeed Friendship Ptfe Tape
cajalado Thread waxaa loo isticmaalaa in la shaabadeeyo, saliidayn, iyo ka hortagga qabashada on handarraabbadeedii dhafnaa, silsilado, iyo qalabka. Waxaa caadi ahaan loo yaqaan:
cajalad tuubiste ee
cajalado Thread waxaa sida caadiga ah laga sameeyey polytetrafluoroethylene (PTFE), sare crystalline, polymer a perfluorinated la si fiican u yaqaan by ay brand Dupont iyo diiwaan summad-dhimatay. cajalad PTFE ayaa Wehliyaha ah mid aad u hooseeya oo ah khilaaf, iska caabin ah kiimikada wanaagsan, iyo iska caabin kulaylka wanaagsan. inertness Chemical ka hortagtaa cross-xiriirinaya oo ka dhigaysa cajalado thread PTFE doorasho wanaagsan ee codsiyada ku lug leh kiimikooyinka xoqe sida oxygen dareere, ama caustics sida hydroxide ammonium. cajalado Thread sidoo kale waxaa la samayn karaa ee polyetylen (PE), caag ah oo qiimo-jaban in joogsadaa biyo iyo kiimikooyin badan.
cajalado Thread qaado sooca ah sida:
PTFE qeybiyeyaasha cajalad thread ku tilmaami alaabta ay labada-cufnaanta sare ama hooseeyo-cufnaanta. cajalado High-cufnaanta thread PTFE sida caadiga ah waxay leeyihiin cufnaanta ah .70 g / cm3 ama 1.2 g / cm3. cajalado Low-cufnaanta thread PTFE sida caadiga ah waxay leeyihiin cufnaanta ah .37 g / cm3. xoog siligga waa xoog looga baahan yahay in ay jebiyaan goosin ka mid ah cajalad thread by jiidaya on darafyadiisa oo ka soo hor jeedda. Muruqa waa korodhka jajab oo dherer ah cajalad thread ee ay sabab u tahay stress in xiisad ama ballaarinta kaamerada. cabbir muhiim u ah cajalado thread ka mid ah dhererka, width, oo dhumucdiisuna. Iyadoo la tixgelinayo substrate waafaqid, qaar ka mid ah cajalado dhimatay waxaa loogu talagalay isticmaalka biibiilayaal, tuubooyinka, ama marinnada aluminium sameeyey, bir madow, ama naxaas. Kale cajalad seal thread PTFE dhaqmayso chrome, copper, dhalooyinka, caag ah, ama caag.
cajalado thread PTFE raacaan laba heerarka tayada ee aasaasiga ah iyo midab-ku suntan kala duwan ee codsiyada. Mil-T-27730A waa faahfaahinta ciidamada Mareykanka ah (mil-Spec) in ku qeexan yihiin oo dhumucdiisuna waxay ugu yaraan 3 mils. AA-58092 waa heer ganacsi haysa looga baahan yahay oo dhumucdiisuna waxay of mil-T-27730A ah, laakiin ku darayaa heer cufnaanta ugu yar. cajalad thread PTFE White bixisaa shaabadood dhagan waayo, noocyo kala duwan oo kala goysyada xidhnayn oo ku haboon yahay tuubooyinka iyo nidaamyada biyo la cabbi karo ugu. cajalad thread PTFE Yellow waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo, shubmo, handarraabbadeedii, khaanadaha, iyo khadadka gaaska ku dhafnaa tuubooyinka in lagu qaado hawada, ammonia, butane, chlorine, ama hydrogen. cajalad dhimatay Pink laga sameeyey oo culus-waajib, PTFE fasalka warshadaha iyo waxa loo isticmaalaa in codsiyada tuubooyinka ganacsiga ama warshadaha. cajalado thread dhimatay Green waxaa loo isticmaali karaa in codsiyada oxygen-wareejinta.